KUDZIDZISA varume kuti mukadzi ANOSVIRWA Sei – Makuhwa.co.zw
KUDZIDZISA varume kuti mukadzi ANOSVIRWA Sei
Nhasi ndoda kudzidzisa vanhurume kuti mukadzi anosvirwa sei zvinoita kuti agutsikane kuti ane murume mumba,vakadzi kana ndichinge ndagona taurai and point exactly pandinenge ndakanganisa. Vakadzi vanoda kutanga vapisa muviri usati wapinza nhengo yako mukati. Tanga wabata mazamu ake hazvinei kuti mazamu acho itambo dzakaita sei bata chete tamba nawo yamwa kana akanikidzwa unonzwa tunyatso twaakuoma iwe wadaro mukise kise kumeso uchidya muhuro nekufemera munzeve wobva watanga kupuruzira mukati mezvidya zvake.
Wapedza deep kiss her pamuromo mukise munzeve dzake uchimuudza zvinyoro nyoro kuti i love u and I want you muudze kuti I want to satisfy you. Wapedza rova rova magaro ake vakadzi vanozvida zvisingaite then puruzira kuseri kwezvidya nechekure kure uchikwira nekumagaro nechekumusoro kwemagaro kuchiuno nyerekedza hako seusingade. Waona kuti ave kunakirwa chibata nhengo yake uchiipuruzira puruzira nyora tumadendenedzwa pachibhinzi chake wochisumudza uchichiregedza nechepazasi pechikongo
panodakunyerekedzwa mukati zvinyoro nyoro dzikisa chigunwe wochiunza kumusoro uchiita seunotsvunha uchivhura makumbo uchinzwa kuti atota here rumwe ruoko ngarwuve rwuine
zvarwurikuita pamwechete nerurimi.
Ukanzwa ave kuti chiisa kana iwe ignore that dzokorora kubata mazamu uchirova magaro ake zvakare, kuzasi kwake kunobva kwatota ukaita nomazvo. Batazve nhengo yake wobva
wapinza chigunwe zvishoma halfway wochitaridza mudenga woita kunge urikudeedza munhu nechigunwe directly pazasi pechoya rumwe ruoko rwuri pazamu uchifemera kukisser
nekuzevezera munzeve uchiita senge zvaunoda uchikoira. Tarisa munhu wako ukaona aakupidigura maziso achishama muromo chidya nhengo yake uchiisa nekubuditsa chigunwe kana ukaona avakurasa njere chigunwe chako chichisvisvinwa nebeche ratota kunge
katsi yakasva mukaka, chipinza nhengo yako zvishoma nezvishoma haikona kumhanya mukakadzi ndewako.
Related Topics:mukadzi ANOSVIRWA